Habka loo tirtiro Baranbarooyinka - Cayayaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Lotta Malmstedt/ Sveriges Radio
Habka loo tirtiro Baranbarooyinka - Cayayaanka
La daabacay fredag 23 november 2012 kl 11.32
Dad badan ayaa dhib ku qaba cayayaanka sida barabarooyinka iyo darbiyada guryaha ee xaaladoodu liidato sannadihii ugu dambeeyayna ay aad u korodhay. Intii u dhaxaysay sannadkii 2006 iyo 2011 ayaa shirkadaha ka hortaga cayayaanka shaqadoodu laba laabmatay.
2600 illaa 6500 ayaa ay kor u kacday shaqada ay shirkadani samayso.
Waana goobaha ay ku badanyihiin dadka badani, balse in xaafadaha ajahanimku degenyiin ee loo yaqaan miljonprogramsområden, ay ku badantay ayaan waxba ka jirin sidaas waxa qaba caalinka ka hortaga cayayaanka Håkan Kjellberg, oo ka hawl gala isla shirkada Anticimex ee shuqulka ku leh tirtirka cayayaankan.
Tusaale ahaan Rinkeby Rosengård ayaan xaqiiq ahayn, ayuu sheegay caalinkani, una jeeda in cayayaan laga heli karo meelaha sida qasriyada waaweyn.
Balse waxa sahlaya in ay cayayaankani fidaan markay galaan guryaha ay degenyiin yihiin dad badani kuwaas oo ah cidhiidhi waa sida u sheegay caalinkan ku xeel dheer la dagaalanka cayayaankan, Håkan Kjellberg
-Maadaamo ay jiraan dad badan oo haysta dhibkan, tusaale ahaan jaranjarooyinka guryaha sida dhisme haysta 20 guri, waa in 20-kaas guriba laga nadiifiyo taasaana ka dhigaysa mid khalkhal ku keeni karta shaqada aan samayno, isaago ka wada marka hal guri u dhibkani la soo gudboonaado waa in dariskana laga baadhaa oo laga nadiifiiya haddii kale ma laga gun gaadhayo.
Dadka degen Xaafadaha Rosengård iyo dukaanlayda Rinkeby ayaa markhaati ah in ay haystaan dhibaatooyinkan sida baranbarada balse ma ahaa in ay sidaas noqoto, waayo waa layska nadiifin kara cayayaankan baranbaarooyinka haddii la adeegsado shaqada ku haboon ee saxda ah.
Ssidaas waxa qaba Håkan Kjellberg.
-Gabi waa layska tirtiri karaa baranbarooyinka, balse waxay ku xidhantay sida loogu diyaar garoobo, haddii aanu helno nadaafad wanaagsan, oo cuntooyinka laga nadiifiyo sida meelaha wax lagu karsado, oo cuntada shoolada gadaasheeda ku lunta la nadiifiiyo, meelaha banaana la daboolo.
Markaas hore ayaa loo tirtiri karaa, haddii ay yihiin hal baranbaro iyo haddii ay yihiin kun xabadoodba, ayuu sheegay Håkan.
Waxaana masuuliyadu saarantay shirkada guryaha leh oo ay tahay in ay nadiifiyaan kana ilaashaan gabi cayayaanka nool guryaha, ayuu sheegay Håkan.
-Sida caadadu tahay shirkada guryaha lihi iskama fogayn karto masuuliyadaas, waayo waxa jira sharci qabanaya shirkada oo ah in ay guryahooda ka dhawraan cayayaanka aan xaqa u lahayn in ay guryaahaas ku noolaadaan, hadaanay jirin qof isagu iskii u keensaday cayayaankaas gurigiisii, taasina sheeko kale ayey noqonaysaa ayuu sheegay caalinkani.
Shirkada guryahu masuuliyada dusha kama saari karaan dadka ku nool guryahooda oo ah in ay iyagu keeneen cayayaankaas, haday sidaas tahay waa in ay cadayn keenaan. Waana mid xaq loogu leeyahay in ay guryahooda ka nadiifiyaan cayayaanka.
Tusaale ahaan waa in ay ku sameeyaan dib u dhis meelaha duugoobay sida qasabadaha liiga ee biyaha musquluhu maraan ama gidaarada daalay ee cayayaanku ku dhex noolaan karaan.
-Dib u habaynta dhismaha guriga ayaa ah qayb ka mida xalka dhibkan. Mana aha mid kuli xalinaysa dhibaatada oo dhan, waayo waa in dib loo habeeya oo la dhisaa meelaha cayayaankani ay ku dhuuman karaan amase ku noolaan karaanba.
Sidaa meelaha dilaacsan, meelaha biyuhu maraan ee aan sida wacan u shaqaynayn, kuwaas ayaa ah meelaha ay ku dhuumanayaan cayayaankani ama ku nool yihiin oo ay ka helayaan jawi ay ku noolaadaan, ayuu sheegay Håkan Kjellberg oo khabiir ku ah ka hortaga iyo tirtirka cayayaankan, isla markaasna ka hawl gala shirkada shuqulku ku leh arrimahan.
Reporter: Jenny.Hallberg@sr.se, SR International iyo Kasim.Abdulkadir@sr.se
Dhagayso: Baranbarooyinka Dukaanda Rinkeby